Giroud wuu ku negaanayaa Arsenal – Wakiilkiisa
HomeWararka MaantaGiroud wuu ku negaanayaa Arsenal – Wakiilkiisa
Majiro qorshe u dejisan Oliver Giroud oo ah inuu ka tago Arsenal bisha January, sida uu qabo wakiilka weeraryahankan reer France.
Olivier Giroud iyo John O’Shea oo kubada isku haysta
Qaab ciyaareedka sagaalka buuraha ah ee Alexis Sanchez ayaa Giroud ka dhigay mid laba kulan oo kaliya lagu bilaabo kulamada xili ciyaareedkan – labada ciyaaroodba ay ahaayeen horyaalka Champions League – laakiin hadana wuxuu dhaliyey shan gool, oo ay ku jiraan saddex uu Premier League ka dhaliyey isagoo kaydka ka soo kacay.
Soo noqoshada Danny Welbeck iyo qaab ciyaareedka sare ee Lucas Perez, kaas oo saddexley aad u qurux badan ka dhaliyey Basel Salaasadii, waxay sii kordhisay cabsida Giroud ee safasho la’aanta iyo booska Arsenal, laakiin wakiilkiisa ayaa sheegay inuu sidaas oo ay tahay ku faraxsan yahay sii joogista iyo ku negaanta kooxda ku ciyaarta garoonka Emirates Stadium.
“Olivier aad buu ugu fiican yahay Arsenal,” Michael Manuello ayaa sidaas u sheegay warfidiyaha Foot Mercato.
“Xili ciyaareedkan halkan ayuu ku dhamaysan doonaa. Wax suurto gal ah oo dhacayaa ma jiraan January. Malaha qorshe uu kaga wareegayo kooxda marka suuqa iibka ciyaaryahanadu furmo ”
Bishii hore, Giroud wuxuu sheegay inaanay jirin wax dareen ah oo uu ka qabo mustaqbalkiisa muddada dheer ee la sii joogista naadiga ah, wallow ay haysato safasho la’aan aad u badan kulamada xili ciyaareedkan.
“Shaki igagama jiro mustaqbalkayga kooxda Arsenal,” ayuu yidhi.
“Sanadkii yimaadaba, waxaa jira tartan adag oo boosaska ah naadiyada waaweyn. Waxaa jooga weeraryahano badan oo kala qaab ciyaareed ah.”
Wararka Somaliga Ah
Manchester City Oo Ku Guuleysatay Carabao Cup + Sawiradii Damaashaadka
Arsenal Oo Ku Durdurisay Basel Iyo PSG oo Guul-sahlan gaadhay